कसैलाई पनि 'एलिमिनेट' नगरी नेपाल आइडलको पैसा कमाउने खेल, नेपाल टेलिकमसँग सेटीङको शंका !
ARCHIVE, INVESTIGATION » कसैलाई पनि 'एलिमिनेट' नगरी नेपाल आइडलको पैसा कमाउने खेल, नेपाल टेलिकमसँग सेटीङको शंका !
काठमाडौँ - नेपाल आइडलबाट आजको अंकमा कोहि पनि बाहिरिएनन् । जजले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरीए यस्तो गरेको भनिएपनि किन यस्तो गरियो भन्ने ठुलो प्रश्नचिन्ह उठेको छ । एपीवानमै आवद्ध केहिले यो काम निर्माताहरुकै निर्देशनमा टेलिकमबाट कमिसन लिनका लागि गरिएको बताएका छन् ।
एपीवानमै आवद्ध केहिले यो काम निर्माताहरुकै निर्देशनमा टेलिकमबाट कमिसन लिनका लागि गरिएको बताएका छन् ।
नेपाल आइडलमा जस्तै अन्य केहि देशका आइडल प्रतियोगितामा पनि यहि तरिका प्रयोग गरेर आयोजकले पैसा कमाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । यस विषयमा नेपाल आइडल समूहले केहि बोलेको छैन । तर निर्णायकको भनिएको यस्तो निर्णयपछी नेपाल आइडलको यो काम गलत भएको र पैसा कमाउने दाउ भएको आरोप धेरैले लगाईरहेका छन् भने सामाजिक संजालमा पनि यसको तीब्र बिरोध भइरहेको छ ।
हेर्नुहोस् सामाजिक संजालमा देखिएका केहि प्रतिक्रियाहरु